Ahoana ny fampiasana fomba fampidirana Youtube? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ahoana ny fampiasana fomba fampidirana Youtube?
Enga anie 12, 2021 0 fanehoan-kevitra 693
Fantatrao ve fa ny YouTube dia mampiditra mode incognito amin'ireo asany? Raha tsy fantatrao ny dikan'ity fitaovana ity ary inona no ilana azy, dia manasa anao izahay hamaky ity lahatsoratra manaraka ity izay hanazavanay ny momba ny maody fampandrenesana YouTube sy ny fomba hampiasanay azy io ao anatin'ny minitra vitsy.
Io no iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra natolotry ny fampiharana finday YouTube ary izany dia tsy mamela soritry ny atiny hitantsika amin'ny alàlan'ny sehatra fandefasana horonantsary malaza. Mijanona miaraka aminay ary mianatra ny fampiasana an'io endri-javatra mahavariana io.
Inona no fomba fampandrenesana YouTube
Vao haingana i Youtube no namoaka an'ity safidy vaovao ity ho an'ireo rindranasa finday ary ny mpampiasa dia afaka mamelona sy mamono azy io isaky ny maniry izy ireo. Ny maody fanaovana incognito dia manakana indrindra ny sehatra tsy hitahiry ny tantaran'ny horonan-tsary rehetra jerentsika amin'ny alàlan'ny lampihazo.
Rehefa manetsika ny fomba fampandrenesana Youtube dia hanao sakano tsy ho voatahiry ao amin'ny finday ny tantaran'ny horonan-tsary fa miteraka isika. Esory koa ny fanamboarana rehetra.
Inona no dikan'ity? Hosakanantsika tsy hanomboka ny fampiharana YouTube manome soso-kevitra atiny mitovy amin'ilay hitantsika nandritra izay andro vitsivitsy izay eo amin'ny lampihazo. Ankehitriny ireo toro-hevitra nomen'ny YouTube dia ho generic kokoa.
Raha vantany vao navadika ho azy ihany koa ny fomba fanamoriana incognito hialantsika ny hijerena ireo horonantsary anaovana fisoratana anarana. Izany dia mitranga satria ny zon'ny famandrihana, Inbox ary Library dia tsy mandeha ihany koa rehefa mampandeha ity endri-javatra ity.
Dingana hampavitrika ny fomba fanamoriana
Tena tsara. Ankehitriny rehefa fantatray ny dikan'ny maody fanaovana incognito ary inona izany, dia hampianatra anao izahay ny fomba tsotra sy haingana indrindra hampiasana ity fitaovana mahaliana ity izay nampiditra ny YouTube amin'ny rindranasa findainy.
Ny zavatra voalohany hazavaina dia izany ity endri-javatra ity dia alefa fotsiny ho an'ny fampiharana finday, izany hoe milaza fa tsy ho afaka hampihetsika azy amin'ny kinova desktop. Ireto misy dingana tokony harahina:
misokatra ny fampiharana Youtube amin'ny findainao
tsindrio momba ny sary famantarana ny piraofilinao
Handeha ho any amin'ny menio Account ianao. Any ianao dia hanana fidirana amin'ny safidy isan-karazany fanahafana.
Izao dia mila tsindrio fotsiny ilay safidy "Alefaso ny maody fanamoriana"
Ahoana ny fomba fampandehanana ny mode incognito
Hitanao fa mora be ny mampandeha ny maody fanaovana «incognito»? Izany no fomba tsotra sy haingana dia haingana hampihenana ity fitaovana ity avy amin'ny fampiharana finday. Eto izahay dia manazava ny dingana tsirairay tokony harahina:
manokatra ny fampiharana YouTube avy amin'ny findainao
Ho hitanao fa tsy miseho eo amin'ny efijery intsony ny sary momba anao. Amin'ny toerany no hisy ny mari-pamantarana modely incognito.
Tsindrio io kisary io ary safidio ny "Atsaharo ny maody fanamoriana"
Izany no ahalavoanao haingana tamin'ny fomba tsy fitokisana Ary izao ny fampiharana dia hanomboka hamonjy ny tantaran'ny horonan-tsary rehetra jerenao amin'ny alàlan'ny fampiharana finday.
1 Inona no fomba fampandrenesana YouTube
2 Dingana hampavitrika ny fomba fanamoriana
3 Ahoana ny fomba fampandehanana ny mode incognito
Ahoana ny fomba hampiasana ny dikanteny amin'ny YouTube?